Waa Xiddig Muslim Ah, Liverpool Ayaa Xalay Old Trafford U Tagtay Si Ay U Daawato Wuxuuna Si Weyn Ugu Raaxaystay Man United - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaWaa Xiddig Muslim Ah, Liverpool Ayaa Xalay Old Trafford U Tagtay Si Ay U Daawato Wuxuuna Si Weyn Ugu Raaxaystay Man United
Waa Xiddig Muslim Ah, Liverpool Ayaa Xalay Old Trafford U Tagtay Si Ay U Daawato Wuxuuna Si Weyn Ugu Raaxaystay Man United
Shaqsiyaad kamida ragga indh0-indhaynta u qaabilsan kooxda Liverpool ayaa lagu soo warramayaa inay ka xaadireen xalay gegida Old Trafford iyaga oo daawanayay kulankii ay Man United guusha dirqiga ah ee 2-1 ka ah ka gaadhay Villarreal oo marti u ahayd.
Kulankaas ayay goolka ku hor mareen Yellow Submarines waxaana hoggaanka u dhiibay weeraryahan Paco Alcacer kahor inta uusan Alex Telles gool cajiib ah bar-bardhaca ugu keenin iyadoo Cristiano Ronaldo uu daqiiqadii ugu dambaysay ee ciyaarta goolka guusha keenay.
Marka laga yimaado inay saddex dhibcood oo muhiim u ah qaateen, Red Devils ayaa ahaa kuwo ay ka gacan sarreysay Villarreal iyadoo David De Gea uu in badan goolal cadaan ah ka dafiray kooxda tababare Unai Emery.
Si kastaba, sababta ay Reds kulankaas ugu daawasho tageen ayaa ah inay daawanayeen garabka kooxda Villarreal ee ree Netherlands ee Arnaut Danjuma kaas oo shaqsiyan si weyn halis ugu ahaa Man United isla markaana ku guuleystay abaalmarinta xiddigii garoonka ee kulankaas.
Hubaal shaqsiyaadka Liverpool u jooga ayaa kusoo qancay qaab ciyaareedkii xiddigaas muslimka ah kaas oo marar badan si sahlan ku jiidhayay Diogo Dalot oo garabka daafaca midig ka ciyaarayay isaga oo darbooyin fiican uu goolhaye De Gea ka badbaadiyay kahor inta uusan caawin goolka Alcacer.
Liverpool ayaa Danjuma oo u muuqday mid aad u halis badan u aragta bedelka mudada dheer ee Sadio Mane, Danjuma ayaa saddex gool usoo dhaliyay Villarreal lix kulan oo uu metelay tan iyo markii uu Bournemouth kaga biiray suuqii xagaaga.
Waryaa xoolo danjuma ma man.of the man ahaa qoralka iska sax
Xidiga garoonka D.Degea ayaa ahaa ayaa soo qorteen, qoraalkaana waxaad ku sheegteen Danjuma inuu ahaa xiga garoonka,
Caqliyadeena miyaa ku ciyaareysaan labadaas qoraal keebaa saxan.
Waad aragtaan bee sawirka rer dudaaye maxaa dhib idin haysta